Realme 6 Pro enweela ụbọchị ntọhapụ maka Europe | Gam akporosis
El Ezigbo 6 Pro ekwuputara ya ma weputa ya na mbido Machị afo a. Ahịa India bụ ebe mbụ ọbịbịa ya, ma ugbu a ọ bụ oge nke European, mpaghara nke nwere ụbọchị mbido gọọmentị maka ngwaọrụ a.
Ekwentị mkpanaka ahụ ga-abanye Europe na May 5 ọzọ, ụbọchị nke, n’oge a na-ebipụta isiokwu a, bụ naanị ụbọchị isii. Nke a na - eme mgbe Realme 6 na 6i ga-eru Chile.
Realme na-ekwe nkwa ịgbasa ozi maka ihe omume na ntanetị, nke ga-eme na 10: 00am (GMT +2). N'ụbọchị ahụ, anyị ga-ama ọnụahịa nke ngwaọrụ maka Europe, nke ka zobebere kpamkpam. Anyị na-asị "ọnụahịa" n'ihi na e nwere ụzọ atọ dị iche iche nke RAM na ebe nchekwa dị n'ime, nke bụ 6 + 64 GB, 6 + 128 GB na 8 + 128 GB.
Realme 6 Pro bụ smartphone na - egosipụta ihu igwe teknụzụ IPS LCD nke gosipụtara 6.6 inch diagonal ma mepụta mkpebi FullHD + nke 2,400 x 1,080 pikselụ. Nke a nwere ike ịrụ ọrụ na 90 Hz ma Corning Gorilla Glass 5 na-echebe ya.
Ngwaọrụ ahụ nwekwara Qualcomm Snapdragon 720G SoC, 64 MP + 8 MP + 12 MP + 2 MP azụ quad igwefoto na 16 MP + 8 MP mkpebi sọrọ n'ihu shooter maka selfies na-nọ na ihuenyo notch. Ọ na-ebukwa batrị 4,300 mAh na ngwa ngwa 30 W.
IKIRU 6.6-anụ ọhịa IPS LCD na 2.400 x 1.080p FullHD + punching (90 Hz) / Corning ozodimgba Glas 5
Gbanwee CAMERA Quadruple 64 MP + 8 MP 119º ultra wide angle + 12 MP telephoto na 2x-20x magnification + 2 MP nnukwu
N'ihu CAMERA 16 MP + 8 MP na nnukwu ngwa ngwa vidiyo na 120 fps
OS Gam akporo na Realme UI
UMUAKA 4.300 mAh na 30 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
Njikọ 4G. Bluetooth GPS. USB-C
Mbibi na ibu ibu 163.8 x 75.8 x 8.9 mm na 202 g
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme 6 Pro enweela ụbọchị ntọhapụ maka Europe
Android 10 bịarutere Nokia 1 Plus